Manameloka ny fanavakavahana LGBT + ny vondrona eropeana satria nametraka lalàna vaovao mampiady hevitra i Hongria
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Momba ny Hongria » Manameloka ny fanavakavahana LGBT + ny vondrona eropeana satria nametraka lalàna vaovao mampiady hevitra i Hongria
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Momba ny Hongria • LGBTQ • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Milaza ny taratasy fa "ny fanajana sy ny fandeferana no ivon'ny tetik'asa Eoropeana" ary mampanantena ny "hanohy hiady amin'ny fanavakavahana ny vondron'olona LGBTI."
Ny fanajana sy ny fandeferana no ivon'ny tetik'asa eropeana.
Nalefa any amin'ny varahina ambony an'ny EU ity taratasy ity ary mialoha ny Andro Iraisampirenena LGBT + Pride amin'ny 28 Jona.
Ahitana anarana 16 ao amin'ilay taratasy, fa nanampy ny sonia ihany koa ny Chancellor Austrian Sebastian Kurz taorian'ny namoahana ilay taratasy, ka lasa 17 ny isan'ireo nanao sonia.
Lohan'ny 17 Vondrona Eoropeana (EU) namoaka taratasy niarahana nanamafy ny fahavononany hiady amin'ny fanavakavahana LGBT + ny fanjakana.
Navoaka ny taratasy iray andro taorian'ny nampanantenain'ny Vaomiera UE ny fitsarana ara-dalàna an'i Hongria momba ny lalàna vaovao manohitra ny LGBT +, ary navoakan'ny praiminisitra Luxembourg Xavier Bettel tao amin'ny Twitter.
Anisan'ireo nanao sonia ny filoha frantsay Emmanuel Macron, ny chancellor alemanina Angela Merkel, ny praiminisitra italianina sy espana, ary koa ny mpitondra ny fanjakana skandinavianina sy balicika, sns.
Ny taratasy dia miantefa amin'ny varahina ambony an'ny EU ary tonga mialoha ny Andro Iraisampirenena LGBT + Pride amin'ny 28 Jona. Tsy milaza mazava an'i Hongria izany, saingy tonga iray andro taorian'ny nampanantenan'ny komisiona eropeana ny fomba ara-dalàna hamelezana an'i Hongria, miaraka amin'ny filohan'ny komisiona, Ursula von der Leyen, miantso ny fanoherana vaovao an'i Hongria- Ny lalàna LGBT + “mahamenatra.”
Navoaka io antontan-taratasy io rehefa nivory tany Bruxelles ny mpitarika ny vondrona eropeanina mba hiresaka momba ny “fanamby manerantany sy ny olana ara-jeopolitika.” Tamin'ny nahatongavany tamin'io hetsika io dia niaro ny lalàna mampiady hevitra ny praiminisitra hongroà Viktor Orban, izay nolanin'ny parlemanteran'ny firenena tamin'ny herinandro lasa teo, izay mandrara ny fitaovam-pianarana tsy hampiditra ny atiny LGBT + ho an'ny ankizy.
Ny parlemanta Hongroà dia nandany ny volavolan-dalàna tamin'ny herinandro lasa teo, saingy tsy maintsy eken'ny filoha izy io mba hahomby. Mandrara ny fizarana atiny momba ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy na fanendrena hanao firaisana amin'ny olona latsaky ny 18 taona amin'ny fandaharam-pianarana, ny sarimihetsika na ny doka. Nilaza ny governemanta fa natao hiarovana ny ankizy fa ny mpitsikera ny lalàna dia milaza fa mampifandray ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy miaraka amin'ny pedofilia.
Nilaza ny Chancelior Alemanina Angela Merkel fa mihevitra izy fa “diso ity lalàna ity, ary tsy mifanaraka amin'ny hevitro momba ny politika izany - raha avelanao ny fiarahan'ny samy lehilahy na samy vehivavy na samy vehivavy nefa mamepetra ny fampahalalana momba azy ireo any an-kafa, dia misy ifandraisany amin'ny fahalalahana amin'ny fampianarana sy ny toy izany. ”
“Nankatoavina ny lalàna. Tsy momba ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy, fa ny fanabeazana no raharaha ho an'ny ray aman-dreny, "hoy i Orban tamin'ny fampahalalam-baovao.
Ny lalàna dia ampahany amin'ny volavolan-dalàna lehibe kokoa manakana ny heloka bevava atao amin'ny zaza tsy ampy taona, ary niteraka tsikera mahery avy tany Bruxelles ho loza mitatao ho an'ny soatoavina soatopeanina. Nilaza ny mpitsikera fa manavakavaka ny lalàna ary manaratsy endrika ny fiarahamonina LGBT +. Niaro ny fepetra i Hongria, izay notohanan'ny antoko mpitondra sy ny mpanohitra. Manitrikitrika izy io fa “miaro ny zon'ny ankizy” ny lalàna ary mandà fa manavakavaka izany.
Ny governemantan'ny praiminisitra Viktor Orban dia niampanga an'i von der Leyen ho nanao “fiampangana diso” ary nilaza fa “tsy misy singa manavakavaka” io volavolan-dalàna io satria “tsy mihatra amin'ny zon'ny filan-kevitr'ireo mihoatra ny 18 taona izany.”
Ny fivoriana an-tampon'ny vondrona eropeana dia mivory any Bruxelles amin'ity alakamisy sy zoma ity, hiadian-kevitra momba ny COVID-19, ny fanarenana ara-toekarena, ny fifindra-monina ary ny fifandraisana ivelany, araka ny fandaharam-potoana ofisialy.